ChiGerman, Germany musangano weFrankfurt-Almanx - GERMANX
« : Musi waGumiguru 17, 2012, 09:24:57 am »
-> Vadiwa Shamwari,
Tiri kuronga kusangana nenhengo dzeGermanx dzinogara muFrankfurt am Main. Kunze kwezvandakagara ndiri pro wekufambidzana, patakasangana nezuro nemunin'ina wedu Pegasuss, akati sei isu tisingaronge musangano kuFrankfurt. Ndikati kudii kwete. Ndakati ndichaenda kumba ndonotanga musoro manheru, asi mangwanani chete, ndave kugona izvozvi.
Pegasuss akandibvunza; Chero ani zvake anouya kuFrankfurt? (Nekuti achangosvika, uye tasangana kaviri.)
Ndikati: I think kadir76 ichauya, ndati kune vamwe vasvikawo.
Iye ndokuti: Sei isu tisingasangane, akadaro, chirevo icho chakaputika ndokuenda.
Iye zvino chero munhu anoda anogona kuuya kuzosangana. Mumusangano uyu wehukama neushamwari watakaronga muFrankfurt, hatidi kuti takasangana nekutaura kuforamu pamberi. Chinangwa chemusangano uyu ndecheKUSANGANA, KUTAURA
Zvakare, wer ist dabei?
Re: Frankfurt-Almanx musangano
« Reply #1: Gumiguru 18, 2012, 10:16:20 pm »
-> MUNHU WESE ANOKOKWA !!! TINOZARURWA KUSVIRA ZVESE MUMUSANGANO. ZVITSVA ZVIMWE, NZVIMBO YEMUSANGANO NEZVESE ZVINOGONA KUUYA ...
« Reply #2: Gumiguru 18, 2012, 11:45:52 pm »
Aya marudzi emasangano akanaka, handigone kuti kwete kwavari, asi zvakakwana kumutsidzira nyaya dzekare, ndinongoida.
Zvaunofanira Kuita Kuti Uwane Chirongwa chekuGurisa ChiGerman uye Turkish Workbook
Zvinyorwa zvinotarisirwa kuHomes Association Visa
Dzvanya kuti utore Fomu yeChikumbiro yeMhuri.
Dzvanya pano nokuda kweFilled Application Form (SAMPLE).
Kubatana Kwemhuri (A1) Sinavi Zvose Zvakajeka
Zvinyorwa zvakakumbirwa muGermany
Asati aita motokari yako Turkey uye matanho anodiwa vachatorwa
Zvinyorwa Zvichida Kumhuri Yomukati Visa
Zvinyorwa Zvinodiwa KuVisitori Visa
Dzvanya pano kuti uwane mutengo unodhura
Visa Application uye Nzira dzeMbairo
« Reply #3: Gumiguru 18, 2012, 11:56:39 pm »
ehe shamwari, ini ndiri frankfurta ndichangosvika. Ino inzvimbo yakanaka, tasangana neyedu rukudzo shamwari pano, Mwari komborera munhu kwaye arikuedza kundibatsira.Ngatisanganei neshamwari dzinouya kuguta ratiri tinoda kubatsirana fln.Takamirira kune mese frankfurta.
« Reply #4: Musi waNovember 09, 2012, 10:23:39 pm »
.. Mwari vachida !!
« Reply #5: Musi waNovember 10, 2012, 02:43:31 pm »
-> Zuva racho harisati rajeka, shamwari hadzina kunyora chero chinhu. Ini handimirire chero nguva, zvakadaro, chero wandinoziva ari muFrankfurt, ndinoshevedza tosangana. Unogona kujoina nzira pese paunoda, hanzvadzi yangu.
« Reply #6: Musi waNovember 10, 2012, 04:37:03 pm »
Yakatorwa kubva: fuk_18 - Gumiguru 18, 2012 pa 11:45:52 pm
Asi zvakaringana kukanganisa mafundo ekare, ndinongozvida
« Reply #7: Musi waNovember 10, 2012, 08:19:51 pm »
« Reply #8: Mbudzi 12, 2012, 12:23:17 ndiri »
3,14 Iyi offenbach-ditzenbach ichiri ghetto imwe chete?
« Reply #9: Mbudzi 12, 2012, 12:36:16 ndiri »
-> Akanaka hama, ini handizvizive izvozvo. Asi ndeipi chikamu chemagariro chawaitaura nezvacho? Ini ndinogona kutsvaga Offenbach uye Dietzenbach. Tora zvinonetsa, mukoma, izvo zvaunoda kundiudza chaizvo.
Enda kune das; -s, -s
1. pege; eil Teil einer Stadt, mune dem viele Menschen einer einzigen (meist armen) sozialen Gruppe leben
2. Hush; Teges einer Stadt, in dem die jüdische Bevölkerung leben musste
© Langenscheidt KG, Berlin neMünchen
« Reply #10: Musi waNovember 12, 2012, 04:01:49 pm »
Yakatorwa kubva: Pegasuss - Gumiguru 18, 2012 pa11: 56: 39 pm
ehe ndinoitsigira toommmmmmmmmmmmmmmmmm
Ndinoshuva dai taimbova mwana.